म कसरी मेरो वेबसाइटमा एक स्वचालित ब्याकलिङ्क जेनरेटर लिङ्क सिर्जना गर्छु?
आजकल, हरेक वेबसाइट रैंक प्रगति को लागि सबै को गुणवत्ता लिंक प्रोफाइल को महत्व जान्दछ. अनि यहाँ चाहिँ गुणस्तर सधैँ धकेल्नु पर्ने आवश्यकता छैन - ती पुरानो समयमा बिर्सनुहोस् जब एक ठूलो ब्याकलिङ्क काउन्टरले उनीहरूको वास्तविक गुणको सट्टा प्रमुख आधारभूत कारकहरू प्रयोग गर्दथे।. र म गुणस्तर लिङ्कहरू प्राप्त गर्ने तीन तरिकाहरू भन्दा तल तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, वा म भन्न सक्छु - एक स्वचालित ब्याकलिङ्क जेनरेटर जस्तै र सम्झौता बिना. त्यसोभए, हामी कसरी गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं, वा लिङ्क एक्सचेंजको साथसाथै एक DIY स्वत: ब्याकलिङ्क जेनरेटर भन्न सक्छौं, साथै अतिथि ब्लग पोष्टहरू उच्च पीआर (पृष्ठ पङ्क्ति) र डीए (डोमेन प्राधिकरण) ) बदलामा.
लिङ्क एक्सचेंजको यो पुरानो विधि (अन्यथा, लिंक पाङ्ग्राहरू) को व्यापक ब्याकलिङ्कहरूको ठूलो गणनाको निर्माण गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।. लिङ्क एक्सचेंज एक होगा मात्रात्मक स्वचालित ब्याकलिङ्क जनरेटर को लागि पनि जानिन्छ. यो तरिकाले सामान्यतया धेरै लिङ्कहरू आदान प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ, उदाहरणका लागि तपाईको आफ्नै साइट र अन्य वेबसाइटहरू (i. ई. , ब्लग पेजहरू तपाईंको सँगी ब्लगरहरू द्वारा संभाला छ, वा सम्भवतः कुनै अन्य वेबसाइटहरू यस पारस्परिक लाभकारी योजनामा ​​भाग लिन इच्छुक र तयार छन्).
निस्सन्देह, लिङ्क एक्सचेंजको लागी जाँदा धेरै फाइदाहरू छन्, यसको सम्भावित जोखिमबाट खोज इन्जिनद्वारा रैंकिङ दण्ड कमाउने - सम्झौताका दुई पक्षका लागि।. मेरा मतलब छ कि कुनैपनि परिस्थितिमा तपाई कम्तीमा बहादुर हुनु पर्छ एकपटक यसलाई प्रयास गर्न - केवल किनभने यो सही तरिका हो जसले मानिसहरूलाई पारस्परिक लाभ पाइरहेको छ. यसैले, तपाईंको प्रसोधन योग्य लाभहरूमा मुख्य फोकस सेट गर्नुहोस्, लिंक एक्सचेंजसँग सम्भावित हानि छैन, तपाइँलाई पनि सावधानी लिन सिफारिस गरिएको छ।. मेरो मतलब छ कि यो योजना को लागि यो योजना को परीक्षण गर्न को लागि अलग ब्लग या वेबसाइट हुनु पहिले नै अग्रिम खेल को व्यावहारिक नियमहरु को समझने को लागि एक पूरी तरह देखि गठित निर्णय हुनेछ, एक त्वरित रैंकिंग दंड कमाई को बिना.
अतिथि ब्लग पोर्टल
लिङ्क एक्सचेंज एक पटक यो प्रयास गर्न पनि एक राम्रो खतरनाक कुरा लाग्न सक्छ, ठीक छ? त्यसपछि तपाइँ गुणस्तर लिंक भवनको अर्को तरिका विचार गर्न सक्नुहुनेछ - अतिथि ब्लग पोष्टहरू लेख्नुहोस्. जब ठीक भयो, अतिथि ब्लगिंग पनि एक उचित विकल्प हुन सक्छ जो तपाईंलाई स्वयं मा एक स्वचालित बैकलिंक जनरेटर जस्तै कार्य गर्न को लागी अनुमति दे सकते हो. अतिथि पोष्टहरूको वास्तविक शक्ति महसुस गर्नुहोस् - एकदम प्रासंगिक उच्च गुणस्तरको सामग्री लेख्नको लागी तपाईंको समय नलगाउनुहोस्. एक लोकप्रिय ब्लग मा प्रकाशित गर्न को लागी एक शुरुआती समझौते को रूप मा या पर्याप्त पृष्ठ र डोमेन प्राधिकरण संग कुनै अन्य तृतीय पक्ष अनलाइन स्रोत, यो लेखन मा आफ्नो समय र प्रयास को निवेश को समय हो.
एक पटक तपाईंको लेख वा अतिथि पोष्ट तयार भएपछि, तपाइँलाई आवश्यक पर्दछ यसलाई फिर्तामा प्राकृतिक कार्बनिक ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न को लागी. वैसे, प्रमुख खोजी इन्जिन (अधिकृत Google जस्तै) द्वारा अधिकृत रहेको छ, यो विधि शायद सबै भन्दा सुरक्षित हो. त्यसोभए, तपाईलाई अतिथि पदहरूमार्फत गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू कमाउन प्रयास गर्नुपर्छ. सबै पछि, अधिक लक्षित ट्राफिक लाई सीधा वेबसाइट मा पम्प गर्न को लागी व्यापक रूप देखि प्रयोग गरिन्छ, यो विधि newbies, र पेशेवरहरु द्वारा राम्रो तरिकाले मान्यता प्राप्त छ Source .